KHILAAF LA SHEEGAYO IN UU SOO KALA DHEX GALAY URURKA XISBUL ISLAAM EE DAAHIR AWEYS | Toggaherer's Weblog
Ururka Xisbul Islaam ee ka mid ah kooxaha la dagaalamaya Dowladda KMG ayaa qarka u saaran inay labo garab u kala jabaan, kadib markii uu soo kala dhex galay ismaandhaafkii ugu xooganaa ee abid soo dhex gala Mas’uuliyiinta.
Sida ay baahisay Tv-ga Afka dheer ee Al-Jazeera qeybteeda afka Carabiga Saraakiisha sar sare ee Xisbul Islaam ayaa ah kuwo ku kala qeybsan qaababka kala duwan ee lala dagaalamayo Dowladda KMG.
Wararka ayaa sheegaya in Ururkan oo uu hogaamiyo Sheekh Xasan Dahir ay qaarkood dhaliilsan yihiin weerarada ismiidaaminta ee ay adeegsadaan Ururka Alshabaab, kaasoo Xubno uu ugu horeeyo Xasan Dahir ay aad uga soo horjeedaan, waxaana tani ay ka dambeysay markii uu wadaadkaas todobaadkii hore uu cod hoose uga hadlay qarixii ismiidaaminta ee lala eegtay Wasiirkii Amniga.
Ururka Xisbul Islaam oo ay haatan heysato labo daran mid dooro ayay waxay wararka intaa ku darayaan in qaar ka mid ah saraakiishooda ay ku dhawaaqeen inay la bahoobayaan Ururka Alshabaab oo ay haatan dagaalada isku dhinac ka yihiin.
Saraakiisha qaar oo aan magacooda la sheegin ayaa ku taageersan fikirka qaraxyada ismiidaaminta, waxaana la sheegayaa inay ku doodaan inay qeyb ka tahay la dagaalankooda.
Hadal uu dhowaan jeediyay Afhayeenka Baarlamaanka ayaa waxaa uu ku sheegay in Ururka Xisbul Islaam uu ka yara dabacsan yahay Alshabaab, waxaana uu sheegay in iyaga wada hadal lala gelo karo oo ay joogaan meel dhow, hase ahaatee Xarakada Alshabaab ayuu ku tilmaamay kuwo mowqifkooda fogaaday.